သင်၏မျှဝေထားသောမီဒီယာကိုအမှတ်တံဆိပ်ပြုသင့်သလား။ | Martech Zone
သင်၏ Shared Media ကိုအမှတ်တံဆိပ်ပြုသင့်သလား။
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 22, 2014 အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 22, 2014 Douglas Karr
သတင်းအချက်အလက်၊ whitepapers၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ၄ င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုလုံးအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုလုပ်ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ငါတို့ကသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်၏အစွမ်းသတ္တိကိုအသုံးချဖို့အမြဲကြိုးစား။ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် ၄ င်း၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသံနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသူတို့ဖြန့်ဝေသောပစ္စည်းများတွင်ထားရန်အရေးကြီးသည်။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ် သင်၏အမှတ်အသားကိုသူသို့မဟုတ်သူမကြားသည့်အခါသင်၏အလားအလာကိုစဉ်းစားသည်။ အများပြည်သူကသင်၏နာမည်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသမျှအရာအားလုံးပါပဲ။ တကယ်တော့ (ဥပမာ - ရော်ဘင် - အပြာ - အပြာအကွက်) နှင့်စိတ်ခံစားမှု (ဥပမာ - ရင်ခုန်စရာ) ။ သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဓမ္မဓိobject္ဌာန်ကျကျတည်ရှိ; လူတွေမြင်နိုင်တယ် အဲဒါပြီးပြီ သို့သော်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏စိတ်တွင်သာတည်ရှိသည်။ ဂျယ်ရီ McLaughlin, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ?
တခြားအချိန်တွေမှာတော့သူတို့ဖြန့်ဝေတဲ့မီဒီယာကိုတံဆိပ်ခတ်တာကိုရှောင်တယ်။ ကျနော်တို့ infographics ဖွံ့ဖြိုးသည့်အခါမကြာခဏပါပဲ။ whitepapers နှင့် infographics ကဲ့သို့သောဖြန့်ဝေသည့်မီဒီယာများသည်ဆိုဒ်များကိုမျှဝေရန် ပို၍ ကြီးမားသောအခွင့်အရေးရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကြော်ငြာကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ပေါ်လာသောအခါ၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်အခွင့်အလမ်းများကိုထိခိုက်စေသည်။ သင်၏ဖြန့်ဝေထားသောအကြောင်းအရာကိုမည်မျှအထိတံဆိပ်ကပ်ကြောင်းနှင့်၎င်းအားဝေမျှနိုင်မှုကိုထိခိုက်နိုင်မလားသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအနေနှင့်၊ Angie ရဲ့စာရင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိများစီးရီး။ Angie's List တွင်အံ့သြလောက်ဖွယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရှိပြီး ၀ က်ဘ်ပေါ်၌၎င်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမှတ်တံဆိပ်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လူများသည်၎င်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးမှတ်မိလွယ်သောကြောင့်မျှဝေရန်လေ့ရှိသည်။ ထွက်ရှာပါ သွားကုသမှုလမ်းညွှန် နှင့် Landscaping and Lawn Care မှရာသီအလိုက်လမ်းညွှန်တစ်ခု။ Infographics တစ်ခုချင်းစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Angie's List တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊
အခြားအချိန်တွေမှာတော့ငါတို့ဟာလူသိများတဲ့၊ ခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်မရှိကြသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရာအောင်မြင်မှု၊ အကျယ်ပြန့်စွာဝေမျှနိုင်သည့်အလွန်အားကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်ကုမ္ပဏီ၏တံဆိပ်ကပ်ခြင်းထက်ဇာတ်လမ်းနောက်ကွယ်မှဇာတ်လမ်းကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူကိုသူတို့ကုမ္ပဏီကိုမဟုတ်ဘဲအကြောင်းအရာကိုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည့် landing page တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုဟယ်လိုဝိန်းဝန်းကျင်တွင်သတ်မှတ်ထားချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုပင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အဆုံးစွန်သော၌ငါတို့အာရုံစိုက်ခေါင်းစဉ်ဖြန့်ဝေဖို့ဖြစ်တယ် မပါဘဲ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသူများကသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်တွန့်ဆုတ်သွားနိုင်သည့်လွှမ်းမိုးသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ထိုအလုပ်ခဲ့တယ်!
သို့သော်အခြားအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်၏ site တစ်ခုတွင်ပြင်းထန်စွာတံဆိပ်ကပ်ထားသည့် infographics များကိုတွန်းအားပေးခဲ့သော်လည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုအထင်အရှားကြော်ငြာခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ infographic စီးရီးတွေကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာတိတ်တဆိတ်တည်ဆောက်စေချင်တယ်၊ ဒါမှထုတ်ဝေသူများကမီဒီယာကိုမျှဝေပြီးသူတို့တံဆိပ်ကပ်ထားတာကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကို infographic နှင့်အတူ, ဖြန့်ဖြူးကျယ်ပြန့်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ (မှားယွင်းစွာ) ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာပြီးနောက်တံဆိပ်ခတ်ပြီးသူတို့တည်ဆောက်ခဲ့သောအရှိန်အဟုန်အားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုငါပြတော့မည်မဟုတ်။
ဤရေရှည်မဟာဗျူဟာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဤကုမ္ပဏီကိုကုမ္ပဏီအဖြစ်ရှုမြင်ရန်ဖြစ်သည် ကျွမ်းကျင်မှု၏အရင်းအမြစ် သူတို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း။ တနည်းအားဖြင့်ငါတို့ရန် infographics အသုံးချခဲ့ကြသည် သူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်အဲဒါကိုအာရုံစိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
သင်၏ဖြန့်ဝေထားသောမီဒီယာကိုသင်မည်ကဲ့သို့အမှတ်တံဆိပ်ပုံထားခြင်းသည် ၄ ​​င်း၏ဝေမျှနိုင်မှုအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်သည်အွန်လိုင်းကြေငြာသူများအားဗီဒီယို၊ အချက်အလက်၊ အဖြူရောင်စာရွက်များ၏အားသာချက်များကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုနေ့စဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်gရာမကြော်ငြာသည့်နေရာများမှဥပမာများကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပယ်ချလေ့ရှိသည်။ ထုတ်ဝေသူများကကြော်ငြာမလုပ်ချင်ကြပါ မင်းအတွက်သူတို့ဟာပရိသတ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့သင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ကြီးစွာသောမီဒီယာကိုအသုံးချချင်တယ်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသင်အသုံးပြုတဲ့တံဆိပ်ရဲ့အတိမ်အနက်ကိုတမင်ရည်ရွယ်ထားပါ။
Tags: အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ် infographicsဖြန့်ဝေမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်ပါအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သော infographicsမျှဝေမီဒီယာwhitepapers
Net Promoter Score (NPS) စနစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။